Ufo Lights - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ufo Lights)
150W High Bay UFO
150W High Bay UFO 1. 5000K 150W ufo mere ka ọkụ na -ejikarị eme ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ogige ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. LED High Bay Light DLC bụ ọhụụ mara mma. Obere na ibu na ibu, ogologo oge na-adịgide adịgide. 4....
100w Onye nlekọta sekọndrị arụmọrụ Led UFO highbay light
100w Onye nlekọta sekọndrị arụmọrụ Led UFO highbay light 1. 100w Sekit dịkọrọ iche Buru ìhè ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. Ejiri ọrụ dịka 100w Igwe ọkụ bụ ihe ejiji...
200w Onye nlekọta sekọndrị arụmọrụ nwere ọkụ UFO highbay light
200w Onye nlekọta sekọndrị arụmọrụ nwere ọkụ UFO highbay light 1. 200w Agbanyere arụ ọrụ A na-ejikarị ọkụ eme ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ogige ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, nnukwu ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. Ejiri elekere 200w Ejiri ọkụ bụ ihe ejiji...
100w IC Led UFO highbay Industrial ìhè
100w IC Led UFO highbay Industrial ìhè 1. IC 100w Highbay Industrial Light ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. 100w LED Industrial Light bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere na ibu...
150w DOB Led UFO highbay Industrial light 1. DOB 150w Led UFO Highbay Light ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. DOB LED UFO 150w Industrial Light bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere...
100w DOB Led Industrial ìhè
100w DOB Led Industrial ìhè 1. DOB 100w 13000lmLed ìhè ọrụ ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. DOB Led Industrial 100w ìhè bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere na ibu na ibu, ogologo...
150W UFO ọkụ ụlọ nkwakọba ihe
150W UFO ọkụ ụlọ nkwakọba ihe 1. na-eme ka ọkụ ụlọ ọrụ amazon ama ama ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. Ufo ụlọ nkwanye ọkụ bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere na ibu na ibu,...
100w 150lm / w ọkụ ọkụ ụlọ
100w 150lm / w ọkụ ọkụ ụlọ 1. Eji ọkụ ọkụ 100w ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. 150lm / w Ụlọ nkwakọba ihe 100w Ìhè Ìhè bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere na ibu na ibu, ogologo...
Ufo Lights ufo lights 100W Ufo Light 60w Ufo Led Lights Sensor Ufo Light Ufo Low Bay Light Led Ufo Light 200W Ufo High Bay